Ndị a nwere ike ịbụ ọnụahịa nke iPhone ọhụrụ 7 | Akụkọ akụrụngwa
Apple ekwenyela na ọ ga-eweta ya ọhụrụ iPhone, nke n'ikpeazụ a ga-akpọ iPhone 7 n'agbanyeghị asịrị siri ike na aha ya nwere ike ịbụ iPhone 6 SE, nke na-esote September 7. Anyị ka nwere ọtụtụ ajụjụ iji dozie gbasara ngwaọrụ mkpanaka ọhụrụ nke Apple, mana ọ ga-ekwe omume na otu n'ime ha, nke metụtara ọnụahịa ya, edozila tupu oge ahụ.
Ma ọ bụ na nchapu si China emeela ka anyị mata ihe ga-abụ ọnụahịa nke iPhone 7 ọhụrụ ahụ. Ka ọ dị ugbu a, ọ bụ naanị nkọwa ka ekpughere banyere ihe anyị ga-akwụ maka iPhone 7 na iPhone 7 Plus, na-enweghị mmetụta ọ bụla nke ụdị nke atọ a nụrụ na Apple ọhụrụ.
Dị ka ọ dị ka ọ gosipụtara n'ụzọ zuru ezu, ụdị 16 GB nke nchekwa mechara pụọ, na iPhone 7 ga-abata na 32, 18 na 256 GB na ndị a ga-abụ ọnụ ahịa ya;
Ọ bụrụ na anyị jiri ọnụ ahịa tụnyere ihe iPhone 6S nwere ugbu a na China, Ha dabara, dịka ọmụmaatụ, na ọnụahịa nke 7 GB iPhone 32 na 16 GB nke iPhone 6S. O doro anya na nke a bụ ezigbo ozi ọma na ọ bụ na anyị agaghị akwụ ụgwọ ego karịa maka iPhone ọhụrụ.
Iji gosipụta ọnụahịa ndị a, anyị ga-echere rue Septemba 7, nke anyị maralarị bụ ụbọchị akwadoro maka ngosipụta gọọmentị nke ngwaọrụ mkpanaka ọhụrụ Apple na ogologo oge.
Kedu ihe ị chere maka ọnụahịa nke iPhone 7 ọhụrụ ahụ?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Ndị a nwere ike ịbụ ọnụ ahịa nke iPhone 7 ọhụrụ ahụ
Dị oke ọnụ….
7 asịrị banyere iPhone 7 nke ga-emezu n'oge na-adịghị anya